रिफ्रेस हुन चन्द्रगिरी जाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहास्, ज्यान जाला — Imandarmedia.com
रिफ्रेस हुन चन्द्रगिरी जाँदै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहास्, ज्यान जाला
काठमाडौं। शुक्रबार र शनिबार रिफ्रेस हुनका लागि चन्द्रागिरी जानेको घुँइचो लाग्ने गरेको छ। काठमाडौंबाट नजिकै, व्यवस्थित र सरल भएकाले धेरैको रोजाइको गन्तव्य बनेको छ चन्द्रागिरी।
तर चन्द्रागिरी हिल्सले संचालन गरेको चन्द्रागिरी केबलकारको कमजोरीका कारण सयौँको सातो जाने गरेको छ। मंगलबार दिउसो सार्वजनिक भएको एउटा घटनाले केवलकार चढ्न जानेहरु सचेतमात्र होइन् त्रसित हुने अवस्था आएको हो।
यात्रा गरिरहेका कारहरु अचानक रोकिएपछि कोकोहोलो नै मच्चिएको थियो। अचानक रोकिएका कारण तीन घण्टापछि खुलेका थिए। थानकोट प्रहरीका अनुसार केबल कारमा रोकिएकाहरुको उद्धारका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा २ जना चिकित्सक र ,
नर्सहरुसहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। रोकिन पुगेका ३७ जनालाई केबलकारहरुबाट फर्काइएको थियो। थानकोट प्रहरीका डीएसपी डिल्लीनारायण पाण्डेले ती ३७ जना चढेका कारहरु जेनेरेटरको,
बिजुली चलाएर फर्काउँदा एउटा कार फर्किने गति ज्यादै सुस्त भएकोले ३० मिनेट लागेको जानकारी दिए। उनहरुको इमर्जेन्सि उद्धार गरिए पनि जेनेरेटरमा समस्या देखिएपछि केही समय केवुलकार संचालनमा अबरोध आएको थियो।
दिउँसो करिव ३ बजे प्राविधिक गडवडीका कारण केवुलकार संचालनमा समस्या भएको भए पनि हाल पुन संचालन भइसकेको चन्द्रागिरी हिल्सले जनाएको छ। केवुल कार बन्द हुँदा चन्द्रागिरी डाँडामा करिव ४ सय जना रहेको कम्पनीको भनाई छ।
मर्मतसम्भार समय–समयमा गर्नुपर्नेमा त्यसलाई ख्याल नगर्दा यात्रु कारमै झुण्डिएर बस्नुपर्ने र निसास्सिने अवस्था आएको भन्दै पीडितहरुले केबलकारको निगरानीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन्।